yakakwirira frequency induction kutengesa simbi uye chikamu chendarira maitiro
musha / Applications / Induction Brazing / induction simbi simbi uye zvikamu zvendarira maitiro
Categories: Applications, Induction Brazing Tags: high frequency soldering copper, high frequency soldering steel, induction soldering, induction soldering ndarira, induction kutengesa maitiro, soldering, soldering brass, soldering steel, simbi yesimbi nendarira
Industry: Induction Kutengesa Kugadzira
midziyo: DW-UHF-6KW yakabata ruoko induction kutengesa heater
Zvishandiso zveKwayedza 1: Brass cap
Zvishandiso zveKwayedza 2: Hollow iron
Kutya: 800 oF (426 ° C)
Time: 3-4 sec.
Izvo zvikamu zvinoshandiswa mumvura level control system.
Matanho ekuitisa Bvunzo 1:
Kutanga, mutengesi usati waumbwa unoiswa pasi pemuromo wepepa rekushanda. Zvadaro, iyo cap yakawedzerwa. Iyo magetsi magetsi - akaiswa kune matatu masekondi. Iyo nzira yekutengesa inopedzwa.
Matanho ekuitisa Bvunzo 2:
Zvekare, iyo pre-fomu mutengesi inoiswa kutenderedza muromo wepamusoro weiyo yekushanda. Waya iri kutengeswa inowedzerwa kune yekushanda. Iyo magetsi magetsi's timer yakaiswa kune 4 masekondi. Maitiro ekunyepedzera kutengesa anopedzwa mukati menguva yakatarwa. Iye mutengesi akawandisa anoshambidzwa.
kubheka carbide matipi ane induction